Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 17:1-26
17 Jesu akataura zvinhu izvi, akatarisa kudenga ndokuti: “Baba, nguva yakwana. Kudzai mwanakomana wenyu, kuti mwanakomana wenyu akukudzei,+ 2 sezvo makamupa simba pamusoro pevanhu vese,*+ kuti ape upenyu husingaperi+ vanhu vese vamakamupa.+ 3 Kuti vawane upenyu husingaperi,+ vanofanira kusvika pakukuzivai,* imi Mwari mumwe chete wechokwadi,+ naJesu Kristu wamakatuma.+ 4 Ndakakukudzai panyika,+ sezvo ndapedza basa ramakandipa kuti ndiite.+ 5 Saka iye zvino Baba, ndikudzei parutivi rwenyu nekukudzwa kwandaiva nako parutivi rwenyu nyika isati yavapo.+ 6 “Ndakaita kuti vanhu vamakandipa panyika vazive zita renyu.+ Vakanga vari venyu, mukandipa, uye vakachengeta* shoko renyu. 7 Iye zvino vasvika pakuziva kuti zvinhu zvese zvamakandipa zvinobva kwamuri; 8 nekuti ndakavapa mashoko amakandipa,+ uye vakaabvuma, vakasvika pakuziva kuti zvechokwadi ndakauya semumiririri wenyu,+ uye vakatenda kuti makandituma.+ 9 Ndinovakumbirira; handikumbiriri nyika, asi vaya vamakandipa, nekuti ndevenyu; 10 uye zvinhu zvangu zvese ndezvenyu uye zvenyu ndezvangu,+ uye ndakakudzwa pakati pavo. 11 “Handisisiri munyika, asi ivo vari munyika,+ uye ini ndiri kuuya kwamuri. Baba Vatsvene, vachengetedzei+ nekuda kwezita renyu, iro ramakandipa, kuti vave vamwe* sezvo isu tiri vamwe.*+ 12 Pandaiva navo ndaivachengetedza+ nekuda kwezita renyu, iro ramakandipa; ndakavadzivirira, uye hapana kana mumwe chete wavo akaparadzwa+ kunze kwemwanakomana wekuparadzwa,+ kuti rugwaro ruzadziswe.+ 13 Asi iye zvino ndava kuuya kwamuri, uye ndiri kutaura zvinhu izvi munyika, kuti mufaro wangu uve wakazara mavari.+ 14 Ndakavapa shoko renyu, asi nyika yakavavenga, nekuti havasi venyika,+ seni ndisiri wenyika. 15 “Handisi kukumbira kuti muvabvise munyika, asi kuti muvachengetedze pane akaipa.+ 16 Havasi venyika,+ seni ndisiri wenyika.+ 17 Vaitei vatsvene* muchishandisa chokwadi;+ shoko renyu ichokwadi.+ 18 Sekundituma kwamakaita munyika, iniwo ndakavatuma munyika.+ 19 Uye ndiri kuzvitsvenesa nekuda kwavo, kuti ivowo vatsveneswe nechokwadi. 20 “Handikumbiriri ivava chete, asiwo vaya vanotenda mandiri neshoko ravo, 21 kuti vese vave vamwe,+ semi Baba muri pamwe neni uye ini ndiri pamwe nemi,+ kuti ivowo vave pamwe nesu, kuti nyika itende kuti makandituma. 22 Ndakavapa kukudzwa kwamakandipa, kuti vave vamwe, sesu tiri vamwe.+ 23 Ini ndiri pamwe navo uye imi muri pamwe neni, kuti vabatanidzwe zvakakwana, kuti nyika izive kuti makandituma uye kuti makavada sekundida kwamakaita. 24 Baba, ndinoda kuti vaya vamakandipa vave neni pandinenge ndiri,+ kuti vakwanise kutarisa kubwinya kwamakandipa, nekuti makandida nyika isati yavambwa.+ 25 Baba Vakarurama, nyika haina kusvika pakukuzivai,+ asi ini ndinokuzivai,+ uye ava vakasvika pakuziva kuti makandituma. 26 Ndakavazivisa zita renyu uye ndicharizivisa,+ kuti rudo rwamakandida narwo ruve mavari uye ini ndive pamwe navo.”+
^ Kana kuti “penyama yese.”
^ Kana kuti “kuwana ruzivo pamusoro penyu.”
^ Kana kuti “vakateerera.”
^ Kana kuti “vabatane.”
^ Kana kuti “takabatana.”
^ Kana kuti “Vatsaurei.”